violations of election laws Junta Censors Election Fraud News in Rangoon/ရန်ကုန်တွင် မဲမသမာမှု သတင်းများ ဖော်ပြခွင့်ဆင်ဆာ နအဖမှပိတ်ပင် Posted in abuse of government authority
USDP wins with advance votes in Kachin State (ကချင်ပြည်နယ်တွင် ကြံ့ဖွံ့ပါတီ ကြိုတင်မဲများဖြင့် အောင်ပွဲခံ)
As votes are counted in the first election in Burma in 20 years, the junta-backed Union Solidarity and Development Party (USDP) seems to be leading in many constituencies in Kachin State because of advance votes, said the opposition parties.
In Hpakant township, the National Democratic Force (NDF) party candidate, Daw Bawk Ja, was leading when the polls closed. However, the USDP candidate, former Northern Regional commander Maj-Gen Ohn Myint, forged ahead when the advance votes were added.
Democratic Party candidates accuse EC officials of fraud, vote-rigging, blocking party election observers in Mandalay (ဒီမိုကရပ်တစ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများမှ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အား မဲလိမ်မှုများနှင့်ပါတီရွေးကောက်ပွဲ လေ့လာသူများကို ပိတ်ပင်မှုများအပေါ်စွပ်စွဲ)
Burma's “three princesses”—the daughters of former prime ministers—each ran as candidates for the Democratic Party (Myanmar) and each suffered defeat in Sunday's polls, which were marred by widespread fraud and abuse of the electoral process by the military regime and its proxy party, the United Solidarity and Development Party (USDP).
Citizen casts invalid vote due to USDP members being inside the voting station. Claims no election education given. မဲပေးသည်။ ပယ်မဲပေးခဲ့သည်။ မဲရုံများတွင် ကြံ့ဖွံ့များချထားသည်။ ကြံ့ဖွံ့မှ မုန့်ဝေ၊ ဦးထုတ်များပေးပြီး စည်းရုံးရေးဆင်းနေသည်။ လူထုကို ပညာပေးတာ
A Kachin state citizen advised through interview that "I have Voted invalid ballot. There are USDP members inside the voting station. They provided bread and organized the people but not election education." | မဲပေးသည်။ ပယ်မဲပေးခဲ့သည်။ မဲရုံများတွင် ကြံ့ဖွံ့များချထားသည်။ ကြံ့ဖွံ့မှ မုန့်ဝေ၊ ဦးထုတ်များပေးပြီး စည်းရုံးရေးဆင်းနေသည်။ လူထုကို ပညာပေးတာမရှိပေ။
Police, USDP, Red Cross and Custom members rigging votes for USDP and intimidating voters ရဲ/ကြံဖွံ့/ကြက်ခြေနီ/အကောက်ခွန်များ ရှိပြီး စစ်ဆေးရေးများလုပ်နေပါသည်။
Tenasserim (unspecified division)
Tenasserim (unspecified township)
A citizen advised that on election day, "The Police, USDP, Red Cross and Custom members are strictly checking voters. They already planned to make me vote for USDP"
ရဲ/ကြံဖွံ့/ကြက်ခြေနီ/အကောက်ခွန်များ ရှိပြီး စစ်ဆေးရေးများလုပ်နေပါသည်။ ကြံဖွံ့ပါတီအားမဲထည့်ရန် လျှာထားသတ်မှတ်သည့်အတွက် ကြံဖွံ့အားမဲပေးခဲ့သည်။
Citizens had no access to polling station and those voted had no knowledge of election in Kachin State (ကချင်ပြည်တွင် တိုင်းရင်သားမဲပေးသူများအတွက် မဲရုံမရှိ၊ မဲပေးသူများ ရွေးကောက်ပွဲ ကြောင်းနားမလည်)
A Kachin state resident interviewed by Burma Election Tracker said: "Police and USDP members surrounded the ballot station as security guards. There was no ballot station for Kachin ethnic voters, so most of them did not vote and those voted did had no knowledge about the election. They voted because they were told to. I don't think the election will bring change.”
Opposition cries foul over election results, refuse to sign official tallies, have filed complaints, and may call for vote recounts or reruns (ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်များအပေါ် ပြိုင်ဘက်များကညည်းညူ၊ တရားဝင်မဲရလဒ်များကို အတည်ပြုလက်မှတ်ထိုးရန် ငြင်းဆန်)
Date/Time: Tue, 2010-11-09 09 Login to post comments
NDF candidates in Hpakant and Myintkyinar reject election results due to vote rigging and unfair election process (ဖားကန့်နှင့် မြစ်ကြီးနားမှ NDF ကိုစားလှယ်လောင်းများက မဲလိမ်မှုများနှင့်တရားမျှတမှုမရှိသော ရွေးကောက်ပွဲအစီအစဉ်ကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုလက်မခံ
USDP buys votes and forces people to vote in Chin State / လွတ်လပ်စွာ မဲပေးခွင့်မရရှိကြောင်း။ Posted in abuse of government authority
According toasource in Chin State, voting in the township happened without National Registration Cards being checked. The same source also said that "the USDP gaveapresent while they campaigned" and then forced people to vote.
Shan Nationalities Democratic Party (SNDP) lose due to rigged and unfairly obtained advance votes အကြံအဖန်လုပ်ထားသောမဲများနှင့် တရားမျှတမှုမရှိသောကြိုတင်မဲများကြောင့် ရှမ်းလူမျိုးများဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (SNDP) ရှုံးနှိမ့်)